अर्थ समितिका सभापतिले भने–पुँजी बजार सरकारको प्राथमिकतामा परेन
काठमाडौं : अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले पुँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि नबढेसम्म समग्र अर्थतन्त्रको विकास नहुने बताएका छन् । पुँजी बजारलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा पारेको छैन । नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरूले पनि पुँजी बजारको विस्तृत पक्षका बारेमा बुझेका छैनन् । नीतिनिर्मार्ताले नै नबुझेपछि बजारको अपेक्षा अनुसार विकास हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालको २२ औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रममा शुक्रबार सभापति ज्वालाले पुँजी बजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरहरूबीच सर्वपक्षीय छलफल गरेर बजार सुधारका काम तत्काल गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्थ समितिको सभापतिको हैसियतले त्यसको संयोजन गर्न म तयार छु, हामी सबै बसेर निचोड निकालौं अनि बजारको विकासका नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाऔं,’ उनले भने ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि अनगिन्ती काम भइरहेको बताए । पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन बाटो खुला भएको छ । ‘नाफा कमाएका आकर्षक कम्पनीहरू अब फ्रि प्राइसमा पुँजी बजारमा आउन पाउने भएका छन्, यो नै पुँजी बजारको २३ वर्षे इतिहासको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।
बजार विकासका लागि आवश्यक ऐनकानुन परिमार्जनको काम भइरहेको छ । पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि धितोपत्र बोर्डले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अघि सारेको उनले बताए । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम देशव्यापी बनाउनेक्रममा धितोपत्र बोर्डले कर्णाली अञ्चलमा पुगेरसमेत कार्यक्रम गरिसकेको छ ।
धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष शूरवीर पौड्यालले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर सक्षम बनाउनुपर्ने बताए । सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जले अबको समयमा चल्दैन, यसलाई निजीकरण गर्न वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर सक्षम बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्यले पुँजी बजारका समग्र पक्षका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नियमन दरो बनाएर बजारका अत्यावश्यक पूर्वाधार विस्तार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । पुँजी बजारको आकार बढेको अनि दैनिक कारोबार भोल्यूम पनि निकै माथि लागेको अवस्थामा ब्रोकरको पँुँजी पनि बढाउन आवश्यक भएको बताए ।
स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि संरचनागत र प्राविधिक पक्षमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने बताए । पुँजी बजार राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । ब्रोकरलाई तत्काल शाखा खोली काम गर्नु दिनुपर्ने उनको माग थियो । ब्रोकरले मार्जिन कारोबार, लगानी व्यवस्थापनसहितका काम गर्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो । २२ औं वार्षिक साधारण सभाले संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम छ ।
विश्वकप फुटबल : फ्रान्स कि क्रोएसिया ? यसरी हुँदैछ भिडन्त
नेप्से सूचकमा हरियाली छाउँदा कारोबार रकम किन भयो सुस्त ?
नेप्सेका सीइओ चन्द्रसिंह साउदलाई काममा फर्काउन सर्वोच्चले सरकारलाई दियो आदेश
इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न कानुन अभाव, दोस्रो स्टक एक्सचेन्जका लागि पहल गर्दै धितोपत्र बोर्ड
सिद्धार्थले बोनस खातामा पठाउनुअघि सेयरधनीका नाममा जारी गर्यो यस्तो उर्दी
नयाँ नेपाल लघुवित्तको २५०% हकप्रदमा कहिले हुने भयो बुक क्लोज ?